Indlela Yokubulala Umthi Ngaphandle Kweekhemikhali
Ubulale Umthi Ngaphandle Kweekhemikhali
I-Control Control Minus Chemicals
Ukubulala umthi kuwumsebenzi onzima, ingakumbi ukuba uyakuphepha ukusebenzisa uncedo lweekhemikhali. Kufuneka unqunyulwe amanzi, ukutya kunye / okanye ilanga ngexesha elibucayi kumjikelezo wobomi ukwenza lo msebenzi. Ulwaphulo olusebenzayo lusebenza ngokugubha okanye ukuvala izixhobo zokusebenza zomthi ukucima isityalo esinye okanye ngaphezulu kwala ngasentla.
Imithi ingabulawa ngaphandle kokuxhatshazwa kwemithi okanye iikhemikhali kodwa ixesha elide, umonde, nokuqonda imithi yomzimba kuyimfuneko.
Ngokukodwa ufuna ukukwazi malunga nomsebenzi womthi womthi womnquba we-carkum, i-xylem kunye ne-phloem-kunye nendlela abadibanisa ngayo imikhosi ekuchaphazela ubomi bomthi.
I-bark ngumzimba omngcipheko womthi inxalenye engaphezulu komhlaba kunye neyona nto elula yokubulala. Ukulimaza izimpande ngokwaneleyo ukubulala umthi ngokukhawuleza kunzima kwaye kunzima ukwenza ngaphandle kokusebenzisa iikhemikhali.
I-bark yenziwe nge-cork kunye ne-phloem ekhusela i-cambium kunye ne-xylem. Ama-cell xylem afile aqukethe amanzi kunye neemaminerali ukusuka kwiingcambu ukuya kumaqabunga kwaye uthathwa njengomthi womthi. I-Phloem, izicubu eziphilayo, zithwala ukutya (ushukela) ukusuka kumacembe ukuya kwiingcambu. I-cambium, eselunxwemeni olumanzi kuphela iiseli ezimbalwa, i-layeneral layer ezalisa i-xylem ngaphakathi kunye ne-phloem ngaphandle kwayo.
Ukuba i-phloem yokuthutha ukutya iyakhutshwa yonke indlela ejikeleze umthi (inkqubo ebizwa ngokuthi "ibhinqa"), ukutya akukwazi ukuthathwa kwiingcambu kwaye ekugqibeleni ziya kufa.
Njengoko izimpande ziyafa, kunjalo nomthi. Iimviwo zokukhula ngokukhawuleza, ngokuqhelekileyo ukususela ngoMashi ukuya kuJuni eNyakatho yeMerika, zixesha elihle kakhulu ukumbamba umthi. Ezi zihluma zokukhula ziyakuthi xa umthi womthi "uhluma". Uluhlu lwe-phloem kunye ne-cork luhamba ngokulula, luye lwashiya i-cambium kunye ne-xylem.
Susa njengendawo ebanzi yamagxolo njengoko unayo ixesha lokwenza ibhinti elaneleyo.
Emva koko uhlume (okanye usike) kumphezulu we xylem ukususa i-cambium. Ukuba naluphi na uhlobo lwezinto zokuhlala, umthi uya kuphilisa ngokugqithisa ibhande. Ixesha elihle lokubhinqa lingaphambi kokuba imithi iphume. Inkqubo yokukhupha izityalo izakukhupha izitoreji zamandla kwiingcambu, apho izitolo zingenakuhlaziywa ukuba umzila we-phloem uphazamisekile.
Eminye imithi ikhula kwaye ivelise amahlumela athile ngokukhawuleza. Ukuba awuyikususa okanye ukubulala yonke ingcambu, unokufuneka ulawule ezi zihluma. Iintlobo eziphuma ngaphantsi kwebhanki kufuneka zisuswe njengoko ziya kuqhubeka inkqubo yokutya iingcambu ukuba zishiya zikhule. Xa ususa ezi zihluma, yinto efanelekileyo ukujonga umbhoxo obhinqileyo kwaye ususe nayiphi na intsimbi kunye ne-cambium enokuzama ukuloba isilonda. Ukusika umthi akunakuqinisekisa ukuba kuya kubulawa. Iintlobo ezininzi zemithi, ngokukodwa iintlobo zeeqabunga eziqhambukayo, ziza kuhluma ukusuka kwisiqalo sokuqala kunye nenkqubo yeengcambu.
Isifo seNgcini yeSifo
Izifo Zomthi Wokhuni Olubulalayo
Ukuxilongwa, ukuLawula kunye nokukhusela isiThamo seMithi isiFlux (Wetwood)
Indlela yokwenza i-Cookies Tree
Iingxaki ngeBark Bark Included
Iintlobo zePhysics Physics
Ubuntu boMpawu eziza kunceda ootitshala nabafundi baphumelele